FIKASANA HITOKONA :: Mitaky ny fialan’ny orinasa rosianina ny mpiasan’ny Kraoma • AoRaha
FIKASANA HITOKONA Mitaky ny fialan’ny orinasa rosianina ny mpiasan’ny Kraoma
Hanatanteraka fitokonana faobe mandritra ny telo andro ny mpiasa ao amin’ny orinasa Kraoma SA, etsy Ampefiloha. Voalaza fa manampy azy ireo ihany koa ny mpiasa any amin’ny faritra.
Araka ny fanazavana, dia ny zava-misy iainan’ izy ireo taorian’ny fidiran’ ny orinasa rosianina eo anivon’ny Kraoma Mining no anton’ ity fitokonana ity. “Takianay ny fialan’ ireo rosianina any amin’ ny orinasa Kraoma. Lasan’ izy ireo ambongadiny ny orinasa satria mantsy ny orinasa “Ferrum Mining” no manana ny petra-bola be indrindra ao”, araka ny fanazavan-dRakotomarozafy Mamy Oliva, mpiasa eo anivon’ity orinasa ity, omaly. Nambarany ihany koa fa : “tsy mifanaraka amin’ny ora tokony hiasana intsony ny fotoana iasana any Andriamena ankehitriny. Zary lasa miasa mandritra ny herinandro raha tokony ho andro tsy hiasana ny sabotsy sy alahady raha tsy hoe misy fandaminana manokana”.
Araka ny fanazavan’ izy ireo hatrany, nandalo fotoan-tsarotra ny orinasa Kraoma tamin’ny faran’ny taona 2015 noho ny fidirana an-tsehatry ny fanjakana. “Hatramin’izay, ny orinasa ihany no nitady ny mpividy ny vokatra tao aminy. Nampiditra mpividy avy any ivelany nefa ny fanjakana ka noterena namidy tamin’ireo orinasa ireo ny 80% n’ny vokatra na amin’ny vidiny mora be aza izay niteraka fitontonganana ara-bola tamin’ny Kraoma”, hoy Rakotonirina Onja, mpikambana ao anatin’ny fikambanan’ny mpiasa manao fitokonana.
“Efa nilaza ny avy ao amin’ny minisitera mpiahy fa hiditra an-tsehatra amin’ny famahana ny olana manjo ny orinasa . Ny fampidirana ity orinasa rosianina ity nefa no nampiharin’izy ireo ho vahaolana. Efa nisy rahateo ny fanaovana sonia fifanaraham-piaraha-miasa roa nifanaovan’izy ireo izay tsy fantatra ny votoatiny. Ity fifanarahana ity izay takianay ihany koa ny fanapahana izany”, hoy hatrany ireo mpiasa.
Tsy mbola nanome valin-teny kosa ny avy ao amin’ny minisitera mpiahy, hatramin’ny omaly.
Famatsiana Hanomboka hidina ny vidin-tsolika amin’ny volana jona
FANABEAZANA MAMPIATY :: An-jatony monja ireo ankizy manana fahasembanana tafiditra an-tsekoly
FIATREHANA NY FIHODINANA FAHAROA :: Samy nisantatra ny praopagandy tamin’ ny fotoam-pivavahana ireo kandidà roa